Fahmitaanka Taariikhda Bixinta / Taariikhda ay ku egtahay E-Visa-ha Hindiya
Fahmaan taariikhaha muhiimka ah e-Visa-kaaga Hindida ama Fiisaha Hindida ee Online-ka ah
Waxaa jira 3 taariikho taariikhi ah oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad ka feejignaato marka laga hadlayo E-Visa-gaaga Hindiya ee aad si elektaroonig ahaan ah ugu heshay emayl ahaan.
Taariikhda la soo saaray e-Visa: Tani waa taariikhda ay Hay'adda Socdaalka Hindiya soo saartay fiisada elektaroonigga ah ama Fiisaha Hindida ee Onlineka ah.
Taariikhda ay ku egtahay fiisada elektarooniga ah: Tani waa taariikhda ugu dambeysa ee qofka haysta e-Visa-ha Hindiya uu ku soo galo Hindiya.
Maalintii ugu dambaysay ee joogitaanka Hindiya: Maalinta ugu dambeysa ee aadan sii joogi karin Hindiya laguma sheegin waxtarka ku saabsan e-Visa-gaaga Hindiya. Maalinta ugu dambeysa waxay kuxirantahay nooca fiisaha aad haysato iyo taariikhda aad soo gashay Hindiya.
Waa maxay macnaha Taariikhda Dhammaadka ETA ee ku taal e-Visa-kayga Hindiya (ama Fiisaha Hindida ee Onlineka ah)
Taariikhda Dhammaadka ETA waxay u horseeddaa xoogaa jahwareer dalxiisayaasha Hindiya.
30 Maalmood e-Dalxiiska fiisaha
Haddii aad dalbatay 30 Dalxiis Dalxiis Hindiya Dalxiis markaa WAA INAAD gashid Hindiya kahor "Taariikhda dhicitaanka ETA".
30 maalmood e-Visa waxay kuu ogolaanaysaa inaad joogtid Hindiya 30 maalmood oo isku xigta laga bilaabo taariikhda aad soo gashay. Ka soo qaad in taariikhda dhicitaanka lagu sheegay e-Visa-gaaga Hindiya ay tahay 8-da Janaayo 2021. Tani waxay la macno tahay waa inaad soo gashid Hindiya ka hor 8-da Janaayo 2021. Taas macnaheedu maaha inaad u baahan tahay inaad Hindiya ka baxdo ka hor ama 8-da Janaayo. Tusaale ahaan, haddii aad soo gasho Hindiya 1-da Janaayo 2021, markaa waxaad joogi kartaa ilaa 30-ka Janaayo 2021. Sidoo kale haddii aad India soo gasho Janaayo 5-deeda, markaa waxaad joogi kartaa Hindiya ilaa 4-ta Febraayo.
Si kale haddii loo dhigo, taariikhda ugu dambeysa ee joogida Hindiya waa 30 maalmood laga bilaabo taariikhda soo gelitaanka Hindiya.
Waxaa lagu muujiyey xarfaha casaanka ah ee casaanka ah e-Visa-gaaga Hindida ah:
Waqtiga Xaq u yeelashada Dalxiiska Visa-ha waa 30 maalmood laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay ee India. ”
Fiisaha Ganacsiga elektarooniga ah, Visaha Dalxiiska e-Dalxiiska ee Sannadlaha ah, 1-ta Visa e-Dalxiiska iyo E-Caafimaadka Fiisaha
Waayo, Ganacsiga e-Visa ee Hindiya, 1 Sano / 5 Sano Dalxiiska e-Visa ee Hindiya iyo Caafimaadka e-Visa ee Hindiya, taariikhda ugu dambeysa ee joogistu waxay la mid tahay Taariikhda uu dhacayo ETA ee ku xusan Fiisaha. Si kale haddii loo dhigo, si ka duwan 30 maalmood ee Visa-e-Dalxiiska, kuma xirna taariikhda gelitaanka Hindiya. Booqdayaasha kor ku xusan ee fiisooyinka elektaroonigga ah ee Hindida ma sii joogi karaan taariikhdan.
Mar labaad, macluumaadkan waxaa lagu xusay waraaqaha casaanka ah ee Fiisaha. Tusaale ahaan fiisaha e-ganacsiga, waa 365 maalmood ama 1 Sannad.
Xilliga Qiimaynta e-Visa waa 365 maalmood laga bilaabo taariikhda la soo saaray ETA. ”
Isku soo wada duuboo, fiisaha elektaroonigga ah, Fiisaha e-Ganacsiga, 1 Sano ee Visa-e-Dalxiis, 5 Sano oo Visa-ha Dalxiiska elektaroonigga ah, taariikhda ugu dambeysa ee joogitaanka Hindiya waxay la mid tahay 'Taariikhda uu dhacayo ETA'.
Si kastaba ha noqotee, 30-maalmood Visa-e-Dalxiis Dalxiis, 'Taariikhda uu dhacayo ETA' maahan taariikhda ugu dambeysa ee joogitaanka Hindiya laakiin waa taariikhda ugu dambeysa ee laga soo galo Hindiya. Taariikhda ugu dambeysa ee joogitaanka waa 30 maalmood laga bilaabo taariikhda soo gelitaanka Hindiya.
Haddii aad qorsheyneyso inaad dalbatid e-Visa Dalxiis (30 maalin ama 1 sano ama 5 sano), hubi in sababta ugu weyn ee safarkaagu u yahay madadaalo ama booqashada asxaabtaada ama barnaamijyada qoyska ama yoga. Si kale haddii loo dhigo fiisaha dalxiisku ma ansaxayo safarada shaqo ee Hindiya. Haddii sababta ugu weyn ee aad u timaaddo Hindiya ay tahay mid ganacsi ahaan, markaa halkii ka dalbo fiiso ganacsi. Sidoo kale hubi inaad hubisay u-qalmitaanka fiisadaada elektarooniga ah ee Hindiya.
Muwaadiniinta Mareykanka, Muwaadiniinta Boqortooyada Midowday, Muwaadiniinta Kanada iyo Muwaadiniinta Faransiiska awooddo ka dalbo khadka tooska ah ee Hindiya eVisa.
Fadlan dalbo e-Visa Hindi ah usbuuc ka hor duulimaadkaaga.
Codsiga Visaha elektarooniga ah ee Hindiya